Deeqda waxbarasha Chevening ka furmay Soomaaliya iyo Somaliland. – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
A warsame 18 August 2016
Press Release- Xoghaynta Deeqda waxbarasha Chevening waxaa aqbalaysa codsiyada 2016/2017. Deeqo oo maxlumadkaedda laka helikaro websitka , www.chevening.org/ muddado lacodsanayo waa 3 August ilaa 3 November 2016. Deeqda waxbarasha Chevening , kuwaas oo la siiya shaqsiyaad ka soo leh tacliinta her sare iyo kuwaas oo muujiyey Hanan hoggaanka, waxay bixisaa taageero dhaqaale si ay u bartaan degree Master ah ee mid ka mid ah jaamacadaha kuyalaan waddanka UK iyo fursad ay ku qeyb ka mid ah Ururt saameyn caalamiga ah ee 46,000 Qalinjabiyeyaasha noqday. Waxaa jira in ka badan 1,500 oo Deeqda waxbarasha Chevening on dalab adduunka sanadka 2017/2018 wareegga waxbarashada iyo deeqaha waxbarasho ee ay matalaan maalgashi weyn ka Dowladda UK si loo horumariyo kooxda soo socda ee madaxda caalamka. Baaqa codsadayaasha cusub socota waxay timid marki sagaal kamid ah aqoonyahano soomaliyeed ee kuwaas oo ku guuleystay abaalmarinta ah inaad wax ka barato jaamacad UK ee sanadkan. Danjiraha Ingiriiska ee Soomaaliya, Harriet Mathews wuxuu yiri: ‘Waan ku faraxsanahay inaan ku dhawaaqo furitaanka Barnaamijka Deeqda waxbarasha Chevening ee sanadkan. Deeqdan waxay bixisaa fursad gaar ah si ay u helaan waayo-aragnimo waxbarasho oo fiican iyo si loo ballaariyo aragtida kusahabsaab caalamka iyo bulshada. Deeqda Chevening waa qayb muhiim ah oo shaqada safaaradda si ay u sii qoto xiriirka u dhexeeya labadayada dal iyo in la dhiso buundo u dhaxaysa dhaqamadayn . Maxaa yeelay tayo la ogaaday iyada oo deeqo waxbarasho waa mid ka mid ah waxyaalaha ugu abaal badaan aan waxan ana sameeyo. Waxaan rajeynayaa in aan heli doonaa codsiyada kabadan kuwi sanadki hore. Deeqda waxbarasha Chevening Xoghaynta Agaasimaha, Michael Scott-Kline, ayaa yiri: Kuwa codsadonayo Deeqda waxbarasha waxaa horay u muujinaya nooca hami oo aqoonyahano Chevening. Abaal filasha codsanaya waa wax aan qiyaas lahayn. Ma aha oo kaliya sameeyn aqoonyahano hesho kaliya balsa a heerka koowaad ee waxbarashada UK oo furi kara albaabada in shaqooyinka ay ka soo jeedaan, ay sidoo kale ku biiro ah shabakad caalami ah oo xoog leh – shabakad ay ku soo jiidi doonaa oo gacan ka inta ka dhiman noloshooda. Deeqda waxbarasha Maareeyaha Barnaamijka Chevening, Louise Thomson, ayaa yiri: Culimada waxay dooran kartaa ku dhowaad Dabcan koskay kasta ee rabaan jaamacad kasta oo UK. Sidoo kale waayo-aragnimo nin aqoonyahan ah laga qabanin, culimada waxay fursaado gaar ah sinaysa fursado sanadka oo dhan ay helaan si ay u bartaan la UK, taariikhda, hay’adaha, caadooyinka, iyo dadkeeda. Aqonyahano dawaan yeesheen fahaan balraan ee UK , khibrad dhaxalkooda Britain iyo taariikhda iyada oo guryahooda ay socod iyo qalcado, wada hadlay siyaasadda caalamiga ah ee Xafiiska Arrimaha Dibadda iyo Barwaaqo-sooranka, oo ku milmay aqoonyahano sare, siyaasiyiinta, iyo xataa boqortoyqada kala duwan ee arimaha dhacdooyinka tacliinta, dhaqanka, iyo arrimaha bulshada. Haddii ay tahay gudaha tiyaatarka cashar ama ma, aqonyahano si joogto ah waxbarashada.
Chevening Scholarship opens across Somalia